2012-10-27 @ 07:31 in Andavanandro Hotsarovan'ny mponina eo amin'ny tantarany ny toe-javatra nitranga tamin'ny alarobia 24 oktobra lasa teo teto Antananarivo. Tsy fantatro aloha izay nitranga talohan'ny nahaterahako sy nipetrahako tamin'ity renivohitr'i Madagasikara ity fa hatramin'izay niainako tsy mbola nahita ny toy izany mihitsy aho. Tantara iray hita tamin'ny Baiboly no nisy nitovitovy tamin'izany saingy be ny olona no tsy mino fa mety hisy ("possible") ny toy izany, sady nentina nilazana fa tsy milaza ny marina io boky iray asandratry ny kristiana io fa manamboamboatra ny zavatra soratana ho feno fahagagana fotsiny. Raha ny zavatra tsikaritro anefa dia tsy tamin'io andro io ihany no nisy toe-javatra hafahafa fa efa nisy hafa koa tamin'ny faran'ny herinandro na dia mety ho tsy dia betsaka aza ny nahatsikaritra, saingy nisy dia nisy tokoa ny nahita. Atomboka amin'io nolazaiko farany io ny resaka :
Tamin'ny (farany sa fiandohany?) herinandro tokoa ary, efa nanantena orana fatratra ny olona noho ny setroka efa manempotra dia manempotra tokoa an'Antananarivo. Tsy izany akory no faratampon'ny setroka raha ny fitadidiako satria mbola nahatazana tsara an'i Manjakamiadana izahay raha mijery fa ny tamin'ny 6 novambra 1995 na tamin'ny nahamay ny rova tsy nahita ny nahamay an'i Tranovola izahay (hatreny 67ha) ary tsy tsaroako loatra na nahita nanjavozavo na tsia ny fahamaizan'i Manjakamiadana ihany koa. Ny tany an-tanàna lavitra ambony tendrombohitra no mety ho nahita ny mazava noho ny haintrano fa izahay aloha dia sarotra ny nahita azy. Amin'izao fotoana izao kosa hita ihany ny lavitra fa dia manjavozavo hafahafa noho ny setroka fotsy mitady hivadika ho loko volombatolalaka. Nitady orana izahay, fa tsy nety nirotsaka teto Antananarivo izany. Nisy ny olona no nanesoeso hoe lasa tsy mahay mamantatra ny toetr'andro intsony ny ao amin'ny sampan-draharaha misahana izany fa niteny hoe "ho avy! ho avy!" kanjo tsy nety ho avy. Tsy ny mpisahana izany no tsy mahay fa ilay setroka mihitsy no manakana ny orana tsy hilatsaka. Ny teto Antananarivo no tsy nilatsaka ny orana fa re kosa hoe avy ny orana tany amin'ny manodidina sy ny faritra hafa. Tonga ary ny alina fa akory ny hagaganay izay mpirava taraiky amin'ny valo ora fa nisava ny setroka teto Antananarivo. Ny mahavariana dia izao: tany amin'ny 30 kilometatra miala an'Antananarivo any ireo faritra nilatsahan'ny orana ireo nefa dia nahasava ilay setroka teto an-tanàna. Mba nisava kosa ny setroka, hoy izahay, na dia tsy nisy orana aza teto an-tanàna fa ny mahazatra, raha lazaina ihany koa hoe mahazatra, dia rehefa mirotsaka mihitsy ny orana eo amin'ilay faritra vao mampadio ny rivotra iainana izany. Izay angamba ny endrika hitamason'ilay hoe mamelombelon'aina ny zavamananaina ihany koa ny filatsahan'ny orana. Teto kosa : nisava tsy nisy orana ny teto Antananarivo. Hita tsara toy ireny mahafinaritra ireny raha alaina sary amin'ny alina ny renivohitra. Izaho manokana nieritreritra tao anatiko tao hoe mba hafa kosa izany! Efa mpitranga taloha ve fa tsy tsikaritro sa izay vao nisy toy izany? Tsy afa-mamaly io fanontaniana io ny tenako. Hita tsara avokoa ny jiro mirehitra amin'ny alina ary mazava tsara tahaka ny "carte postale" ny mijery ny rovan'i Manjakamiadana.
Tonga tany am-piasana, niverina nazava dia nazava indray ny andro. Tsy mahita ny lanitra hatreo amin'ny biraoko fa mahatsapa tsara kosa ny hazavana miditra ao an'efitrano. Nanomboka tamin'ny efatra ora anefa dia nanomboka nihamaizina amin'izay... somary efa mahazatra ihany io fa nanomboka amin'ny dimy latsaka fahefany amin'izay ny fahagagana. Maizina sady mandrahona ho avy orana no tazana koa fa toy ny alina lasa aloha. Tena ho avy mihitsy amin'izay ny orana ho an'izay tsy nijery tany ivelany fa nipetraka tao amin'ny biraony ihany (tsy ora firavanay moa izany!) fa hafa mihitsy ny fijery ny lanitra ho an'izay nitazana teny ivelany. Aizi-kitroka anie izany ry zareo! Tahaka ny tsy mivolon-ko avy orana ilay andro ny fijery azy fa dia hoe maizina tsotra izao. Raha mbola tsy nirotsaka ilay "ora-madinika" dia tsy sasatra nijery famataranandro sy nieritreritra hoe maty antenatenan-dalana a